Qarax lala beegsaday shaqaale Turkey ah
Ugu yaraan saddex qof ayaa geeriyooday 20 kale oo ay ku jiraan muwaadiniin Turkey ahna waa ku dhaawacmeen ka dib markii weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyay uu ka dhacay degmada Afgooye.
Qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen shaqaale Turkey ah oo ka shaqeynayay dhismaha wadada Afgooye.
Wasaaradda caafimaadka ee Turkiga ayaa sheegtay in lix muwaadin oo Turkey ah ay weerarkaasi ku dhaawacmeen oo laba ka mid ahna uu dhaawacooda aad u daran yahay.
Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdi ayaa u sheegay idaacadda VOA in qaraxan oo ahaa mid ismiidaamin ah lala beegsaday qandaraasleyaal Turkiga u dhashay iyo askar ilaalo u ahayd.
“4 injineer oo Turki ah, 2 boolis ah iyo 2 qof oo shacab ah ayaa qaraxa lagu dhaawacay,” ayuu yiri Gudoomiye ku-xigeenka Shabeellaha Hoose.
Wakaaladda wararka Turkiga ayaa sidoo kale xaqiijisay in shaqaale Turki ah oo ka shaqeynayay dhismaha lagu dhaawacay weerarkan.
Goobojoogeyaal ku sugan Afgooye ayaa sheegay iney maqleen qarax culus iyo rasaas xigtay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ka dhacay degmada Afgooye.
Laba injineer oo Turkiga u dhashay ayaa ka mid ahaa 80 qof oo lagu dilay weerarkii Ex-control Afgooye ee dhacay bishii December ee sanadkii hore.
Weerarka maanta ayaa yimid saacado uun ka dib markii ciidamada dowaddu ay sheegeen iney iska caabiyeen weerarro ay xalay ku soo qaadeen dagaallameyaal Al-Shabaab ah magaalooyinka Qoryooley iyo Afgooye.
Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay 4 askari oo ka tirsan AMISOM ku dishay weerar ay xalay ku qaadday Afgooye ayna la wareegtay saldhiggooda, hase ahaatee saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in hal askari oo Soomaali ah lagu dilay weerarkaasi.